UPDATE: Abaabul dagaal oo ka socda Dhuusamareeb iyo Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Abaabul dagaal oo ka socda Dhuusamareeb iyo Wararkii ugu dambeeyay
UPDATE: Abaabul dagaal oo ka socda Dhuusamareeb iyo Wararkii ugu dambeeyay
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Warar goor-dhow naga soo gaaray Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in abaabul dagaal oo iska soo horjeeda ay ka socdaan Magaalada Dhuusamareeb.
Abaabulkan ayaa waxaa wada Ciidamada Dowladda Federaalka Somaliya iyo Xoogaga Ahlu Sunada Gobolada Dhexe, iyadoo Dowladda Federaalka iyo Ahlu Sunada Galmudug ay ku hardamayan dhismaha maamulka cusub ee lagu wado in loo yegleelo dadka reer Galmudug.
Dadka deegaanka ayaa ku soo warramaya in shalay iyo maantaba ay Magaalada Dhuusamareeb soo gaareen diyaarado wado ciidan aad u qabaleysan, oo Dowladda Federaalka ay ka dirtay Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Dowlada ayaa Magaalada Dhuusamareeb kaga sugan Aqalka Madaxtooyada, Xarunta Shiirkoole iyo Garoonka Diyaaradaha ee Ugaas Nuur, halka Xoogaga Ahlu Sunna ay dhooban yihiin qaybaha kale ee magaalada.
Xoogaga Ahlu Sunna ayaa dhinacooda dhaqdhaqaaq ciidan ka wada gudaha Magaalada Dhuusamareeb. Madaxda Ahlu Sunna ayaa gelinkii dambe ee Jimcihii duleedka Magaalada Dhuusamareeb ku soo bandhigay ciidan loogu magac-daray (Seefullaahi Ahlu Sunna).
Goobta ciidamadan lagu soo bandhigay ayaa waxaa ka soo muuqday Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax, Gudoomiyaha Guud ee Majmaca Ahlu Sunna Waljameeca iyo Madaxa Xukuumadda Galmudug, Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan.
Abaabulka iska soo horjeeda ee ka socda Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa jira dhinacyo Ahlu Sunna ku taageeraya mowqifkeeda ay ku diiday habdhaqanka Dowladda Federaalka oo aad la dhaliilay.
Tani ayaa waxay sii xoojin kartaa awoodda ay Ahlu Sunna ku dooneyso in ay isaga caabiso colka kaga soo wajahan dhanka Dowladda Federaalka Somaliya.
Odayaasha Dhaqanka iyo waxgaradka reer Galmudug ayaa intooda badan la safan Ahlu Sunada Galmudug, waxayna bilaabeen in ay Warbaahinta ka dhaliilaan siyaasadda dowladda ee ku aadan dhismaha maamulka cusub ee Galmudug.
Cali Dhoof Ugaas Nuur oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan Magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in Dowladda Federaalka ay dooneyso nin ay diyaarad ku keentay Magaalada Dhuusamareeb inay si khasab ah Madaxweyne ugu dhigto dadka reer Galmudug.
Cali Dhoof ayaa sheegay inaanay dadka reer Galmudug ahayn dad xoog lagu qabsan karo, caalamkana ay u sheegayan in waxa ay dowladdu ka wado Magaalada Dhuusamareeb aanay ahayn wax la aqbali karo.
Cali Dhoof ayaa sheegay sababta ay Dowladda Federaalka ugu soo dhaweeyen Magaalada Dhuusamareeb ay ahayd in caalamka la tuso inaanay dadka reer Galmudug diidanayn dowladnimada, balse markii ay dowladda soo dhaweeyen ay bilowday inay is mahdiso.
Nabadoon Cabdi Guure oo ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee reer Galmudug ayaa Dowladda Federaalka ku dhaliilay in ay dooneyso in ay xoog dadka reer Galmudug uga dhaadhiciso waxa ay dooneyso, balse aanay taasi u meelmari doonin.
Nabadoon Guure ayaa caalamka u sheegay in wixii ka dhaco Magaalada Dhuusamareeb ay dusha u ridan doonto Dowladda Federaalka, haddii ay iyadu ku soo gardarootay buu yiri shacabka Galmudug.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa dal iyo dibadba isha ku haya dhaqdhaqaaqyada ka jira Magaalada Dhuusamareeb, waxayna aaminsan yihiin in saan-saan aan wanaagsanayn ay ka soo muuqato Xarunta Maamulka Galmudug.
Dadka Soomaaliyeed ayaa weli xusuusan wixii dowladda ay ka samaysay Magaalada Baydhabo, bishii December ee sanadkii hore, xilli reer Koonfur Galbeed ay ku hawlanaayen doorashada Madaxtooyada.
Dowladda ayaa xilligaa aad loogu dhaliilay in awood sheegasho iyo qalqal amni ay ula tagtey shacabka reer Koonfur Galbeed, iyadoona Baydhabo geysay siyaasi ay u waday inuu noqdo Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Ugu dambeyn, dadka badankii ayaa rumeysan in xaalka Galmudug uu ka cuslaan doono midkii Koonfur Galbeed, haddii aan si wadajira loogu istaagin ka shaqaynta danta iyo doonista ee bulshada reer Galmudug.
abaabul dagaal oo ka socda Dhuusamareeb